Impembelelo yokuThengiswa kweQela lokuQala xa kuthelekiswa neDatha yeQela lesithathu Martech Zone
Ngaphandle kwembali abathengisi abahamba nedatha abathembele kuyo idatha yomntu wesithathu, isifundo esitsha esikhutshwe yi-Econsultancy kunye noMqondiso sibonisa utshintsho kwishishini. Uphononongo lufumanise ukuba i-81% yabathengisi banika ingxelo ukuba bayayifumana ezona ROI zivela kumalinge abo aqhutywa yidatha xa usebenzisa Idatha yeqela lokuqala (xa kuthelekiswa ne-71% yoontanga babo kwindawo yesiqhelo) nge-61% kuphela ecacisa idatha yomntu wesithathu. Olu tshintsho kulindeleke ukuba lube nzulu, nge-82% yabo bonke abathengisi abacwangcisiweyo bacwangcise ukonyusa ukusebenzisa kwabo idatha yeqela lokuqala (i-0% inika ingxelo yokwehla), ngelixa i-1 kwi-4 yabathengisi icwangcisa ukunciphisa ukusebenzisa kwabo idatha yomntu wesithathu.
Nguwuphi umahluko phakathi kweQela lokuQala kunye neDatha yeQela lesiThathu
Idatha yomntu wokuqala iqokelelwa kwaye yeyakho umbutho. Inokuba yidatha yokuthengisa njengeziphumo zophando lwabathengi kunye nedatha yokuthenga. Idatha yomntu wesithathu iqokelelwa ngomnye umbutho kwaye ithengwe iphelele, ifakwe kwidatha yakho yomthengi yangoku, okanye ifumaneke kusetyenziso lomntu wesithathu. Imicimbi ihlala iphakama ngokuchaneka kunye nexesha elifanelekileyo ledatha yomntu wesithathu.
Idatha yeqela lesibini lolunye ukhetho kodwa ayisetyenziswanga ziinkampani. Idatha yeqela lesibini iqokelelwa kubambiswano lweshishini. Ngokwabelana nabaphulaphuli, amaqondo okuphendula angangaphezulu kakhulu, idatha yabathengi inokuba sisityebi ngakumbi, kwaye idatha isekhona ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo. Ukuba unengxaki yokufumana idatha ngakumbi kubathengi bakho, unokujonga ekusebenzisaneni nenkampani eyabelana nabathengi bakho!
Iminyaka, idatha yomntu wesithathu iyeyona nto iphambili kwintengiso yedijithali, kodwa iinkampani eziqhuba kakuhle kakhulu namhlanje ziya zijongeka ngaphakathi, kwidatha yomntu wokuqala. Amanqaku kufuneka aqonde abantu kunye neepatheni zabaphulaphuli-unxibelelwano lwendlela kunye nendima yabo kuhambo lwabathengi-abathengi bafuna ntoni kwaye bayifuna nini. Kuzo zonke iimeko, idatha yeqela lokuqala evela kubathengi bokwenyani iya kuba lolona luncedo.
Iziphumo zovavanyo zisekwe kubathengisi abangama-302 kwaye zaqhutywa ngoMeyi ka-2015 Econsultancy kwaye Uphawu.
Ulwazi oluphambili oza kulifumana kule Ngxelo
Zeziphi izibonelelo ezinokhuphiswano kwiinkampani ezinolwazi ngakumbi ekusebenziseni idatha yazo?
Baziqokelela phi abadlali beqonga eliphezulu idatha yabo yeqela lokuqala kwaye yahluke njani kwinto yesiqhelo?
Ngawaphi amanyathelo okuqala emibutho izama ukusebenzisa okungcono idatha yeqela labo lokuqala?
Zeziphi iintlobo zeedatha ezithile ezikalwe phezulu ngokuchanekileyo nangokusebenziseka?
Khuphela iNgxelo epheleleyo
tags: idatha yomthengiIdatha yabathengi roiubukrelekrele babathengiukuchaneka kwedathaidatha roiUqoqoshoidatha yeqela lokuqalaidatha yeqela lesibiniuphawuidatha yomntu wesithathu
IiBrand ezinkulu zinengxaki, iPear inesisombululo